Gen Biixi “Wiilasha la shaqeeya Kenya waa saamaxaan
Abaanduulaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed Gen.Maxamed Tahliil Biixi oo la hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada Balad Xaawo ayaa ka dalbaday inay soo celiyaan dhalinyarada degmada ee ku sugan dhanka Kenya si ay u abaabulaan ciidamo sida uu yiri.
Jeneraal Biixi wuxuu sheegay isagoo ku hadlaya magaca Hogaamiyaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu cafis u fidiyay dhalinyaradaas haddii ay doonayaan inay dib ugu laabtaan Degmada Balad Xaawo ee Gobolka Gedo.
Wuxuu sheegay in Kenya ay ka lumisay maskaxdeeda inay u adeegsato iska horkeenka ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo, sida uu sheegay taliyaha XDS
Diyaar uma nihin in aan dagaal galno, ma doonaysid in dhalinyarada Soomaaliyeed ay cadawga is hortaagaan, waxaad tihiin waaliddiintiina dhalinyaranimadiina waa cafis aan cidina qaadan karin, xitaa haddii ay rabaan inaan ka mid noqdo dowladda. xoog iyo tababar. ” Sidaasi waxaa yidhi Abaanduulaha ciidamada xooga dalka Gen. Maxamed Tahliil Biixi.
Madaxbanaanida dhulku kuma xirna dowladda ama shaqsiyaad ee waxay ku xiran tahay danta guud, maaddaama dowladda la beddeli karo, calanka, dhulka iyo nidaamka lama beddeli karo, marka waa muhiim in la ilaaliyo oo la difaaco dalka. ayuu raaciyay Taliye Biixi.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Balad Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay Al Shabaab iyo Ciidamada Kenya.
President of Jubaland requires discussion on elections
Khabiirka ayaa saadaaliyay khadka dhexe